Cilmi-baarista jacaylka cilmi-baarista | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan
Hay'adda Reward Foundation waa hay'ad samafal waxbarasho oo hormuud ah oo eegaysa sayniska ka dambeysa galmada iyo xiriirka jacaylka. Nidaamka abaalmarinta maskaxdu wuxuu isu beddelay inuu noo kaxeeyo abaalmarinta dabiiciga ah sida cuntada, isku xidhka iyo jinsiga. Kuwani dhammaantood waxay kor u qaadaan badbaadadeenna.
Maanta, tikniyoolajiyaddu waxay soo saartay noocyo 'supernormal' ah oo ah abaalmarinnadaas dabiiciga ah qaab cunno qashin ah, warbaahinta bulshada iyo filimada internetka. Maskaxdeenu uma ay horumarin inay la qabsato xad-dhaafka ay tani keentay. Bulshadu waxay la kulantaa faafa cudurada dabeecadaha iyo balwadaha khatarta ku ah caafimaadka, horumarka iyo farxada.
Reward Foundation ayaa diiradda saara internetka. Waxaan eegnaa saameynta ay ku leedahay caafimaadka maskaxda iyo jirka, xiriirka, dareenka iyo dambiga. Hadafkayagu waa inaan samayno cilmi-baarista taageerada ee loo heli karo kuwa aan aqoonta lahayn. Qof kastaa waa inuu awood u yeesho inuu sameeyo doorashooyin ku saabsan isticmaalka daroogada internetka. Waxaan eegnaa faa'idooyinka ah joojinta porn oo ku salaysan cilmi baarista iyo warbixinnada kuwa ku tijaabiyay iyaga oo joojinaya. At The Reward Foundation waxaad ka heli doontaa hanuunin ku saabsan dhisida adkeysiga cadaadiska iyo takoorka.
Waxaan nahay hay'ad samafal Scottish ah oo diiwaangashan oo laga sameeyey 23 Juun 2014.
Moobayl: 0750 647 5204 iyo 07717 437 727
Halkan waa kooxdayada hoggaanka hadda.
Madaxa Sare ee Sare
Mary Sharpe, U-doodaha, wuxuu ahaa Madaxa Sarkaalka Fulinta ilaa Maarso 2021. Ilaa yaraanteedii Mary waxaa la dhacsanaa awoodda maskaxda. Waxay ku baaqeysaa khibradeeda xirfadeed, tababarka iyo deeqda waxbarasho si ay uga caawiso The Reward Foundation wax ka qabashada arrimaha dhabta ah ee jacaylka, galmada iyo internetka. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Mary guji halkan.
Xubnaha Guddiga waxaa ka mid ah…
Dr Darryl Mead waa Guddoomiyaha Hay'adda Reward Foundation. Darryl waa khabiir ku xeel dheer internetka iyo da'da macluumaadka. Wuxuu aasaasay xaruntii ugu horreysay ee bilaashka ah ee internetka dadweynaha ee Scotland 1996 wuxuuna kula taliyay dowladaha Scottish-ka iyo Boqortooyada Midowday UK caqabadaha ka imanaya u gudubka bulshada dijital ah. Darryl waa xubin ka tirsan Machadka Kutubta ee Maktabadda iyo Xirfadleyda Macluumaadka iyo Isuduwaha Cilmi-baarista Sharafta ee Jaamacadda College London. Bishii Nofeembar 2019 Darryl wuxuu soo gabagabeeyay muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee Guddiga Abaalmarinta Abaalmarinta wuxuuna noqday Guddoomiyahayaga.
Anne Darling waa tababare iyo lataliye shaqo bulsho. Waxay bixisaa tababarka Ilaalinta Carruurta dhammaan heerarka shaqaalaha shaqaalaha waxbarashada ee madaxa banaan. Anne waxay sidoo kale u fidisaa kalfadhiyo waalidiinta dhammaan dhinacyada Nabadgelyada Internetka. Waxay ahayd Safiirka CEOP ee Scotland waxayna gacan ka geysatey sidii loo abuuri lahaa 'Ilaalinta nafsadeyda' ee caruurta yar yar ee hoose.
Mo Gill wuxuu ku biiray Gudigeena 2018. Waxay tahay xirfadle sare oo HR ah, Xirfadlaha Horumarinta Ururka, Fududeeyaha, Dhexdhexaadiyaha iyo Tababaraha. Mo waxaa ka sarreeya khibrada sanadaha 30 ee horumarinta ururada, kooxaha iyo shaqsiyaadka. Waxay ka shaqeysay qaybaha dadweynaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwo iskaa wax u qabso ku leh doorashooyin kala duwan oo si fiican ula shaqeeya shaqada Hay'adda Reward Foundation.
Wax dheeri ah baro…
La soco xiriiriyahan si aad wax dheeraad ah uga ogaatid "The Reward Foundation":
Saameyntii Pornography Internet oo ku saabsan Caafimaadka Maskaxda iyo Jirka
TRF ee Warbaahinta
Ma bixino daweyn. Waxaan samaynaa adeegyo calaamadeeyn ah oo sameeya.
Reward Foundation ma bixiso talo sharci.
Hay'adda Reward Foundation waxay lashaqeysaa iskaashi ay la leedahay: